Cabdijabaar Sh. Axmed | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Fayadhowrka biyaha waa habka nadiifinta biyaha si loo cabi karo, loogu qubeysan karo, cuntadana loogu karsan karo, iyo adeegsiga kale. Biyaha nadiifka ah ayaa muhiim u ah dhammaan dadyowga kunool gudaha dalka, sababta oo ah walxaha waxyeelada leh ee ku jira biyaha waxay sababi karaan jirro iyo xitaa dhimasho. Tusaale ahaan, biyaha aan loo isticmaalin daawooyin waxay keeni karaan fayras, bakteeriyada, iyo walxaha kale ee khatarta ku ah caafimaadka. Daafaha caalamka, waxaa jira dad badan oo aan haysan biyo nadiif ah. Xaqiiqdii, waxaa jira inka badan hal bilyan oo dad ah oo ku nool dunida oo aan maalin walba helin …
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 24, 2020
Waa Maxay Aragtiyaha Shirqoolka ‘Conspiracy theory’? Aragtida shirqoolku waa sharraxaad ama mala awaal muujinaya in laba qof ama in ka badan ama urur abaabuleen inay sababaan ama qariyaan, iyaga oo adeegsanaya qorshe qarsoodi ah iyo ficil ula kac ah, dhacdo ama xaalad sida caadiga ah loo arkaa inay tahay sharci darro ama waxyeello. Waa maxay shirqool? Shirqoolku waa fal ka duwan ficilka dambiilenimada ee lagu horumariyo. Tusaale ahaan, qofkii qof kale la shirqoola tuugada oo runtii sameeya tuuganimo waxaa lagu soo oogi karaa labadaba shirqool ama tuugo. Shirqoolku waa dambi, ama diyaarin dambi. Fikradaha shirqoolnimada waxay ka hortagaan been abuurka …
Waa buug ka kooban 520 bog, waa buug si farshaxan cilmiyeysan leh loo qoray. Sheeko weliba sheeh lehi, buuggani sheekada qarniga ee ‘Nasiibka Nolosha” waxay akhristeyaasha u soo gudbinaysaa dheeko dhacdooyin xariir ah, oo ku saabsan nolosha lammaanayaal dhawr ah, oo qaarba nasiibka iyo noloshu si u kulmiyey, deegaan iyo deris, goobo waxbarasho, shaqo iyo meelo kale oo ka tirsan dalka gudihiisa. Qisada buuggaan ee la magac baxaday “Nasiibka Nolosha” waxay ka hadlaysaa waayo waayo iyo hab-dhaqankii nololleed ee dhalinta Soomaaliyeed ee wakhtigaas, sida uu ahaa xariirka ka dhaxeeyo:, waalid iyo ubadkiisa, marxaladaha iyo meertooyinka nololleed, qaraar iyo macaan, waana …
Waxaa bilaabmay weji cusub oo tijaabo caafimaad oo ah tallaalka suurtagalka ah ee korona fayruska (SARS-CoV2) ayaa bilaabatay Isniintii, wuxuuna ka bilaabmay magaalada Seattle ee dalka Mareykanka, waxaana la helay qofkii ugu horeeya ee iska diiwaangelinaya tijaabada qaadashada tallaalka. Tallaalka, mRNA-1273, waxaa soo saaray shirkadda cilmiga bayoolajiga ee Moderna oo ay weheliso baarayaal ka socda Machadka Qaranka ee Caafimaadka (NIH). Tijaabada waxaa lagu qaadayaa Machadka Cilmi baarista Caafimaadka ee Washington Permanente ee Seattle. Daraasada wejiga 1aad ayaa ujeedadeedu tahay in lagu tijaabiyo seddex qiyaasood oo kala duwan oo ah tallaalka mRNA-1273 ad ayaa rajeyneysa in ay shaqaaleysiiso 45 qof qaangaar …
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 14, 2020
Ma jirto cid doonayso in gabi ahaanba ka jaahil noqoto waxyaabaha ka dhacaayo dunida. Laakiin xittaa haddii aadan cudurka qabin, cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu saameyn xun oo nafsi ah ku yeelan karaa awoodda deganaanshaha iyo hal-abuurka shaqadaada. Sababta? Dhamaan cusboonaysiinta wararka noocan ah, digniinaha, iyo ogeysiiska naxdinta leh ee caafimaadku waxay ka faa’iidaysteen seddex astaamood oo aasaasi ah oo maskaxda bini-aadamka ah, taasoo naga dhigtay inaan kala firdhino, mashquulinno, iyo, waliba si aad oo murugaysan. Waxaana kamid ah qodobadaan soo socda: Midka hore waa “maskax wareersanaanta,” u jeedkeena ah inaan ku weyno fikradaha ku saabsan wixii tagay ama mustaqbalka. …
Yurub Waxay Si Adag uga Fakaraysaa Sidii ay u Furi Lahayd Ameerika! Xariirka Yurub iyo Mareykan ayaa ah mid aan sidaas usii wanaagsaneen illaa wakhtigii uu xukunka qabsaday Madaxweyne Donald Trump. Sidaas awgeed, hoggaamiyaasha Yurub waxay ku mashquulsan yihiin fikirka ah inay kaligood socdaan laakiin Washington waa inay diyaar u ahaato inay ugu yeerto maskaxdooda! Shirka Amniga ee Munich ee sannadkan wuxuu ku qabsoomay cinwaanka “Westlessness.” Ujeeddada ayaa ahayd mid Cad Ma ahan oo keliya Mareykanka iyo Yurub inay bannaanka u soo saaraan, mawqifyada ku aaddan wax kasta oo ka yimaada isgaarsiinta illaa tamarta, laakiin waxay soo saareen is afgaran …
Marka laga hadlaayo afka Soomaaliga waa af aad hodan u ah lehna lahjado kala duwan oo qowmiyado gaar u ah sida haddii aan soo qaadano afka maay maayga oo aan rabo inaan ka hadlo. Marka taariikhaha ay Soomaalida leedahay laga hadlaayo ee si hagar la’aan ah loo macneeyo waxaa garan karnaa wax walba oo soo jiray qof walba hortii. Laakiin waxaa nasiib daro ah dadyowga qaar ee Soomaaliyeed ee qalin qaado ama tacliin heer uu wax qoro ama alifo uu gaaro waxuu ku caan baxaaa haggar, been abuur, maladiisa uu cilmi ka dhigo, xaqiraad, iyo waliba is difaac ayuu ku …